Vaovao - Chlorothalonil
Chlorothalonil sy fungicide fiarovana
Chlorothalonil sy Mancozeb dia fungicides miaro izay nivoaka tamin'ny taona 1960 ary notaterin'ny TURNER NJ voalohany tamin'ny taona 1960 tany ho any. Chlorothalonil dia napetraka teo amin'ny tsena tamin'ny 1963 avy amin'ny Diamond Alkali Co. (taty aoriana namidy tamin'ny ISK Biosciences Corp. any Japana) ary avy eo namidy tamin'ny Zeneca Agrochemicals (syngenta ankehitriny) tamin'ny 1997. Chlorothalonil dia fungicide miaro amin'ny spektrum amin'ny toerana maro, izay azo ampiasaina amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny aretina foliar bozaka. Ny fanomanana chlorothalonil dia nosoratana voalohany tany Etazonia tamin'ny 1966 ary nampiasaina ho an'ny bozaka. Taona vitsivitsy taty aoriana dia nahazo ny fisoratana anarana amin'ny fungicide ovy any Etazonia. Io no fungicide voalohany nankatoavina ho an'ny voly sakafo any Etazonia. Tamin'ny 24 Desambra 1980, dia nisoratra anarana ny vokatra concentrate fampiatoana (Daconil 2787 Flowable Fungicide). Tamin'ny 2002, ny vokatra bozaka efa voasoratra anarana Daconil 2787 W-75 TurfCare dia lany daty tany Canada, fa ny vokatra concentrate fampiatoana dia nampiasaina hatramin'izao. Tamin'ny 19 Jolay 2006, vokatra iray hafa amin'ny chlorothalonil, Daconil Ultrex, no voasoratra voalohany.
Ny tsena dimy voalohany ho an'ny chlorothalonil dia any Etazonia, Frantsa, Shina, Brezila ary Japon. Etazonia no tsena lehibe indrindra. Ny voly fampiharana lehibe dia voankazo, legioma sy voamaina, ovy, ary fampiharana tsy voavoly. Ny voamadinika sy ovy eoropeana no tena voly ho an'ny chlorothalonil.
Ny fungicide miaro dia manondro ny famafazana eny amin'ny faritry ny zavamaniry alohan'ny hahatongavan'ny aretin'ny zavamaniry mba hisorohana ny fanafihan'ny otrikaretina, mba ho voaro ny zavamaniry. Ny fungicides fiarovana toy izany dia novolavolaina teo aloha ary efa nampiasaina nandritra ny fotoana ela.
Chlorothalonil dia fungicide misy spektrum midadasika miaraka amin'ny toerana misy hetsika maro. Ampiasaina indrindra amin'ny famafazana ravina izy io mba hisorohana sy hifehezana ny aretina isan-karazany amin'ny voly isan-karazany toy ny legioma, hazo fihinam-boa ary varimbazaha, toy ny hain-tany aloha, ny havokavony tara, ny havokavoka, ny vovoka, ny ravinkazo, sns. ary hetsika zoospore.
Ankoatra izany, ny chlorothalonil dia ampiasaina ho toy ny fitehirizana hazo sy ny loko fanampiny (anti-corrosion).